SHORKIE TZU DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Shorkie Tzu Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Shih Tzu / Yorkie ey isku dhafan oo isku dhafan
'Tani waa Charlie Bear. Waa Shih Tzu / Yorkie aka Shorkie, oo halkaan lagu muujiyey isagoo 2 sano jir ah. Waa wiilka ugu macaan uguna jilicsan. Wuxuu sifiican udhaqmay oo wuxuu jecel yahay banaanka, inuu dhex dabaalanayo badda dhexdeeda, kuna ciyaaro kitties iyo koolkoolin. Charlie uusan lahayn wax dhaqan xumo ah ama dhibaatooyin dhaqan . Wuu yaraa adag tahay in lagu dhejiyo sida ilmo yar, laakiin hadda wuu helay. Waa xishood badan yahay ilaa yaraantiisuu ahaa. Wuxuu jecel yahay dadka iyo xayawaannada kale, laf laftiisana laf kuma lahan. '
ingiriiska guga spaniel madow iyo cadaan
Shorkie Tzu ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Shih Tzu iyo Yorkshire Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Charlie Bear, oo ah Shih-Tzu / Yorkie aka Shorkie, ayaa lagu muujiyey halkaan isagoo 2 sano jir ah timahiisa oo gaagaaban.
Milly the Shorkie oo 1 jir ah— 'Pretty Milly waa eey aad ufiican, magaceedu waa saxyahay madaama ay doqon iyo macaan tahay. Way jeceshahay dadka waana Wanaagsan carruurta . Waxay jeceshahay inay is dhuujiso oo ay ciyaarto.
Zoe the Shorkie Tzu (eeyaha isku dhafka ah ee Yorkie / Shih Tzu) oo ah 1 sano jir, waxaa iska leh sawir Priscilla's Precious Pups
Zoe the Shorkie Tzu (Yorkie / Shih Tzu breed breed) sida eey yar oo 10 toddobaad jir ah, sawir waxaa iska leh Priscilla's Precious Pups
Lexi the Shorkie Tzu oo 6 toddobaad jir ah — hooyadeed waxay ahayd burey Yorkie aabbeheedna waa Shih Tzu oo buuxa.
Lexi the Shorkie Tzu oo 6 bilood jir ah, culeyskeeduna yahay 5.5 lbs. — hooyadeed waxay ahayd mid si buuxda u dhashay Yorkie aabbeheedna waa Bred-buuxa Shih Tzu.
'Tani waa Farxad, Super Shorkie ah! Wuxuu ku jiraa 3 bilood sawirkan, inch walbana waa yaab arday. Waa xidhmo tamar iyo kalgacal leh. Isaguba waa qof caqli badan oo xasaasi ah. Wuxuu garanayaa dhawaqa gaadhigayga iyo soohdintiisa inuu maalin walba i salaamo. Wuxuu jecel yahay inuu sariirta sariirta kor ugu qaado si uu ula ciyaaro. Wuxuu sidoo kale jecel yahay inuu wax ku calaliyo, laakiin waxaan ku guuleysannay inaan xakameyno dhaqankaas xun maalmo gudahood. '
Shorkie Tzu eey, xushmad sawir ee Pricelesspups
Ziggy, oo ah Shorkie Tzu eey yar oo jirta 11 toddobaad, culeyskiisuna yahay 3.5 rodol. — hooyadu waxay ahayd Shih Tzu oo nadiif ah, aabbuhuna wuxuu ahaa Yorkshire Terrier saafi ah.
Burburi Shorkie Tzu (Shih Tzu / Yorkie ey isku dhafan) 9 bilood jir
Eeg tusaalooyin badan oo ah Shorkie Tzu
Sawirada Shorkie Tzu
timaha dhaadheer ee eeyaha reer portuguese
adhijir Jarmal st. isku dhafka bernard
jiir Terrier vs jack russell
ceel dib iyo terrier mix
eyga kore ayaa dhasha qaniinyada